कैन एनन, एपिस्टीनका पत्रहरू, क्लिंटन सम्बन्ध, 'सत्य समुदाय': यो अझै पनि ठीक हुनेछ! मार्टिन भिजल्याण्ड
धेरैको लागि, डोनाल्ड ट्रम्प एक व्यक्ति थियो जुन 'गहिरो' अनमास्क गर्ने थियो। क्यून एकअर्कासँग एक खुलासा भएको थियो र त्यसका साथ 'सच्चाइ समुदाय' पूर्ण भाप आयो। जेफरी एपिस्टीनका बारेमा आचारसंहिताहरु संग, त्यो भावना अझ बढी बढ्न सक्छ। "यो विचार हो, pedo-deepstate अन्तमा अनमास्क गरिएको छ"। र त्यसपछि अचानक यो फेरि पछाडि छ एउटा लेख Zerohedge वेबसाइटमा, जसले देखाउँछ कि Epstein गोप्य सेवाको मोह हो जसले मानिसलाई भ्रष्ट पार्न सक्छ।
चलो बस एक क्षण लिनुहोस् र निम्न प्रश्न सोध्नुहोस्: हामी वास्तवमा सोच्दछौं कि 'ठूलो डेटा', स्मार्टफोन्स र इन्टरनेटको आयुमा, बिजुली ब्लकले कसरी जवाफ दिँदै मान्छेलाई हेरफेर गर्ने सत्यको आवश्यकता र 'सत्य' संग खाना खान्छ?
यद्यपि जनसंख्याको एक ठूलो हिस्सा अप्रत्यक्ष हुन सक्छ, त्यहाँ सानो भाग हो जुन क्रैडबाट प्रोग्राम गरिएको छ जुन प्रेरणालाई सुन्न र स्क्रिप्टमा आफैं हराउन (हेर्नुहोस् यहाँ व्याख्या), एलिस भित्र वन्डरल्याण्ड खरगोश सुरंग संग व्यस्त मानव मस्तिष्क को लागी राखन को आवश्यकता हो जो कि गहिरो हो र अधिक देखि अधिक शाखाहरु को लागी दिखाई दिछन। तपाईं सधैं नयाँ आश्चर्य संग सामना गरिनेछ। वास्तवमा, तपाईं यसो भन्न सक्नुहुन्छ कि इन्टरनेट र ठूलो डेटा व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिले कसरी मस्तिष्कको खोजी कसरी जान्छ र यो पनि निर्देशन गर्न सक्छ। अझ सँधै 'सत्य' आवादहरूको लागि एक नयाँ रातो स्तम्भ तयार छ। प्रेरित व्यक्तिको ठूलो भागलाई थाहा छ कि त्यो मूर्ख भइरहेको छ, तर तातोपानीको सुरंग प्रणालीमा यसको सत्य खोज्छ।
कसले हेर्न सक्ने वेबसाइटहरू कुन कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँले कुन लेख पढ्नुहुन्छ? कसले तपाईंलाई मनपर्छ वा तपाईलाई फेसबुक पोस्टको प्रतिक्रिया कस्तो पार्छ? पृष्ठभूमिमा चल्ने सुपर कम्प्युटरहरू र तपाईंको स्मार्टफोनको क्यामेराबाट तपाईंको अनुहार अभिव्यक्ति पढ्न सक्दछ, आफ्नो हृदयको दरको मापदण्ड गर्न सक्दछन्, तपाईले कहाँ हुनुहुन्छ र कहाँका साथ फाँटिरहनुभएको छ, आफ्नो मनोवैज्ञानिक अवस्थाको स्वचालित विश्लेषण गर्न सक्दछ र पूर्ण जानकारी दिन्छ। तपाईंको विश्वव्यापी कसरी हो। त्यहाँ कुनै पनि मानव हात अब समावेश छैन। धेरै व्यक्तिले यो कुरा बुझ्छ कि मिडिया ठूलो पैसाको हातमा छ, तर यो उपयोगी छैन कि खोजको धेरै खुलासा पनि जाँच गरिएको छ? यदि सत्ताको डेटा केन्द्रहरूमा विशाल सुपरकम्पटरहरू हरेक व्यक्तिको एकदमै राम्रो अन्नोधित मनोवैज्ञानिक बनाउने प्रबन्ध गर्दछ भने, यो 'सच्चा' को आवश्यकतालाई खुवाउनु भनेको बालबालिकाको सरल हो। एलिस उत्सुक छ, त्यसैले एलिस एक जादुई औषधि र समय पछि एक नयाँ खरगोश होल को पेशकश गरिन्छ।
"तर तरजलेन्डल, तपाइँ पनि समाचार आलोचना गर्नुहुन्छ र तपाईलाई दुर्व्यवहारमा मानिसहरूलाई बिन्दु गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसैले तपाईले यसलाई यसमा भाग लिनु हुन्छ"। मैले प्रायः हालैका वर्षहरूमा नियन्त्रित विपक्षी र पावर ब्लक को चतुर्थतालाई 'सच्चाई' को लागी प्रतिक्रियाको लागि उल्लेख गरेको छु। यसैले यो महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामी एक समय मा बाँचिरहेका छौ जब यो 'वास्तविक' बाट 'नकली' भेद गर्न लगभग असंभव हुन्छ। सम्पूर्ण इतिहास सहित 'गहराफलक' क्यारेक्टरहरू मात्र सिर्जना गर्न सकिन्छ किनकि हामी अब कुनै पनिमाथि भरोसा गर्न सक्दैनौं। उदाहरणका लागि, जसले मलाई बताउँछ कि जुलियन असान्ज साँच्चै अवस्थित छ? यो पनि एक गहिरो चरित्र वा अभिनेता हुन सक्छ र सम्पूर्ण कथा एक स्व डग खरगोश छेद हुन सक्छ, जहाँ सबै सत्य खोजीकर्ताहरू डुब्न सक्छन्। यस्तो आत्म-डग खरगोश सुरंग प्रणालीको बारेमा ठूलो कुरा यो हो कि डाइजरले यो जान्छ कि यो कहाँ जान्छ। म तपाईंलाई बिन्दु गर्न चाहन्छु कि तपाई पूर्व-खरगोश खरगोश गुफाहरुमा डुब्न हुँदैन।
'सच्चा समुदाय' शक्तिको आदर्श आत्म-बग सुरंग प्रणाली हो। मानिसहरूले सत्यको खोजीमा पूर्ण रूपमा आफैलाई गुमाउन सक्दछन् जब सम्म तपाई तिनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको सुरंग प्रणालीमा कसरी प्रवेश गर्ने र आफूलाई छेदमा डुब्न नसक्ने। हामी वन्डरल्याण्डमा बस एलिस छौँ र त्यसपछि अर्को औषधि निस्किन्छ पाठ 'मलाई पेय' र त्यसपछि 'मलाई खान' पाठको साथ अर्को केक खान्छ। हामी सच्च-सुरंग प्रणालीमा क्यू एनोनको खुलासा र जेफ्रेरी एपिस्टिन वरिपरि एक pedophile सञ्जालसँग निस्कने सबैभन्दा नयाँ संघर्षको साथ लिप्त छौं। "डोनाल्ड ट्रम्पले 'गहिरो' ध्वस्त गरेको छ"हो, अवश्य (मलाई मुस्कान नगर्नुहोस्)। हामी सच्चा जादू डाइको समय समय पछि प्रस्तुत गरौं। फिल्म त्रयी 'द म्याट्रिक्स' को ठूलो धोखा छ, जहाँ हामी सेतो खरगोश पछ्याउन चाहन्छौं। नियन्त्रित हलिवुड सच्चाई नियन्त्रण गरिएको मिडिया र वैकल्पिक मिडिया सत्य जस्ता छन्। तिनीहरू पूर्व डग सुरंग प्रणाली हुन् जसमा सत्य सीरम सबै आकर्षक आकर्षण हो।
एलिस वन्डरल्याण्डमा ताल पावरले तपाईंको ध्यानलाई "911," "Wikileaks," "Deepstate," "Jeffrey Epstein" मा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयास गर्दैछ ताकि तपाईं त्यो खरगोश छेदमा डुब्न सक्नुहुनेछ र अन्तहीन सुरंग प्रणालीमा गुमाउन सक्नुहुनेछ। जबसम्म तपाईं सेतो खरगोश पछि हिंडिरहनु भएको छ तपाईं अझै अर्को सुरंग प्रणालीमा हराउनुहुनेछ। मुख्य स्ट्रीम मिडिया टनेल प्रणालीबाट, तपाईंको ध्यान वैकल्पिक मिडिया सुरंग प्रणालीमा सारिएको छ। सेतो खरगोश पछ्याउन रोक्नुहोस्! तिमी सबै गर्न चाहन्छौ! कुनै खरगोश खरगोश आवश्यक छ तपाईंलाई देखाउन को लागी खरगोश छेद कसरी छ। यो एहसास छ कि खरगोश छेद एक 'आश्चर्यचकित': एक परी भूमि, एक ट्रम्यान्सो, एक गलत वास्तविकता। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राप्ति छ कि घुसाउनु पर्छ कि तपाईं एक वास्तविक वास्तविकतामा राख्नुभएको छ र यो धेरै उद्देश्य हो: कि कथा वास्तविकता मा लगातार तपाईं राख्न। सबैभन्दा महत्त्वेपूर्ण प्राप्ति हुनु पर्छ कि हामीले अब हामी मीडिया र वैकल्पिक मिडिया दुवै को सच्चा सत्य को खरगोश छेदहरुमा क्रल गर्न पर्ने छैन। आफ्नो आफ्नै सुरंग खोल्नुहोस्; सिधा कोर।
यो समयको वास्तविकता मार्फत तोड्न समय हो। मानवता एक सामूहिक झूटा वास्तविकता मा राखिएको छ जुन मिडिया र विश्वव्यापी वेबबाट पूर्ण रूपमा रंगिएको छ। यो केहि पनि लागि 'वेब' भनिँदैन। स्पाइडरले आफ्नो शिकार खिच्न वेबको निर्माण गर्दछ। एक पंक्ति को रूप मा जल्द को रूप मा, मकड़ी आफ्नो शिकार मा dives र यसलाई encapsulates। हाम्रो संसारको दृश्य पूर्णतया हाम्रो आँखा र कानको धारणामा आधारित छ। हामी टिभी देख्छौ; जस्तै नै हामी ढोका बाहिर जान्छौं हामी अखबारहरू, पत्रिकाहरू र विज्ञापनहरूसँग घनिष्ठ छौं; हामी आफ्नो स्मार्टफोन स्क्रिनमा हेर्छौं वा रेडियो ब्लाउज सुन्नौं। ठूलो डाटा स्पाइडर वेब थ्रेड कन्वेयर बेल्टमा कम्पन हुन्छ। यो कि खरगोश छेदबाट बाहिर चढ्ने समय हो; वेब छोड्न हामी सम्झना गर्ने सार को सामूहिक झूठ ट्रुमन को वास्तविकता संग शुरू हुन्छ वास्तविकता। यसको मतलब छ कि तपाईंले त्यो गलत वास्तविकतामा राख्नु भएको सबै च्यानलहरू स्विच गर्नु पर्छ। तिमीलाई याद छ तिमी कसौ.
ट्याग: anon, एपस्टीन, विशेष, जेफरी, पैदल नेटवर्क, pedo, pedophiles, Q
12 जुलाई 2019 मा 14: 58
ठूलो मात्रा मा यो निश्चित रूप देखि सुरक्षा निलम्बन (पीआईपीपी) हो, किनकि यो निश्चित रूप देखि सेवा को एक दशक देखि अधिक छ र लिपि को मान्छे को बारे मा जानिन्छ। तर यो समय र भेदको बारेमा सबै हो, त्यसैले यस सिर्जना चुम्बन शिकारमा चिसो नगर्नुहोस्। अनप्लग गर्नुहोस्
13 जुलाई 2019 मा 14: 29
13 जुलाई 2019 मा 16: 42
Mundus decipi ergo decipiatur भरिएको छ, संसार धोखा गर्न चाहन्छ, त्यसैले यो धोखा गरिनेछ।
16 जुलाई 2019 मा 00: 06
16 जुलाई 2019 मा 12: 50
राम्रोसँग हामी अझै पनि तिनीहरूका मूर्ख एन्टिटिक्ससँग सामान्य शंकास्पदहरूले छक्क परे।
16 जुलाई 2019 मा 03: 04
मेरो प्रश्न छ कि तपाईंको पछिल्लो लेखसँग सम्बन्धित छ।
तपाईं कसरी आत्मा पत्ता लगाउनुहुन्छ वा होइन?
16 जुलाई 2019 मा 09: 11
एक अचम्मको अवतारले आत्माको सम्पूर्ण अवधारणालाई हास्यास्पद भ्रामक रूपमा खारेज गर्नेछ र उनीहरूको आत्मालाई कहिल्यै आश्चर्य नगर्ने हो भने। एक अचम्मको अवतार, शुद्ध भौतिकवादी भनिएको छ, विश्वास छ कि त्यहाँ मृत्यु पछि केही छैन र ब्रह्मा सबै त्यहाँ छ।
प्रायः तिनी धार्मिक विचारधारामा अवधारणात्मक रुपमा भाग लिन सक्षम हुनेछन् किनकि यो थाहा छ, तर उसले / तिनी साँच्चै के हो भनेर सोच्न सक्दिन।
उहाँले / त्यो प्रश्न सोध्नु हुनेछ "म के हुँ?" र उसले / तिनी विश्वस्त हुनुहुन्छ "म मेरो शरीर हुँ"।
« 'अहू' ए ए प्रोग्राम हो जसले मानव-अवतार बायो-रोबोटको स्वत: पालट भरिएको छ
हामी कसरी ठूलो परिवर्तन ल्याउन जाँदैछौं यदि 99% inanimate छ? »
कुल भ्रमण: 49.601